CASITA MAYA | Amakamelo angu-8 agcwele BEACHFRONT - I-Airbnb
CASITA MAYA | Amakamelo angu-8 agcwele BEACHFRONT
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Félix
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Jul 31.
I-Casita Maya iyisakhiwo esinamakamelo angu-8 anengadi, indawo yokuphumula ebhishi yangasese, idokhu elivulekile elinama-hammocks, ama-kayak namabhodi okugwedla ezivakashi. Igumbi ngalinye line-A/C, indlu yokugezela yangasese, indawo yokuhlala kanye ne-TV. Amakamelo angaqashwa ngokwehlukana noma ungakhetha ukuqasha yonke indawo.
Ngaphezu kwalokho, ngenkathi zihleli e-Casita Maya izivakashi zikwazi ukufinyelela i-WiFi yamahhala, ideski elingaphambili lamahora angu-24. Udinga indawo yokupaka? Indawo yokupaka evikelekile yamahhala iyatholakala eCasita Maya.
Ihlinzeka ngenhlanganisela ekahle yenani, ukunethezeka kanye nokunethezeka, ihlinzeka ngesilungiselelo esivumelana nesabelomali esinezinhlobonhlobo zezinsiza ezidizayinelwe abahambi abafana nawe. Izindawo ezijwayelekile zakhiwe ngamathala amabili, eyodwa iphansi futhi enye ingaphezulu, womabili anokubukwa kwechibi.
Amagumbi e-Casita Maya ahlinzeka ngokupholisa umoya nendawo yokuhlala, futhi izivakashi zingahlala zixhumene ne-wifi yamahhala. Sinamagumbi angu-4 anemibhede ephindwe kabili engu-2 namagumbi angu-4 anombhede olingana nenkosi.
I-Casita Maya itholakala kalula eduze ne-Jaguara Restaurant ehlinzeka ngokudla kwaseMexico futhi ibamba abaculi abahlukene kusihlwa.
Izivakashi zikwazi ukufinyelela ideski elingaphambili lamahora angu-24